Warshadda Mashiinka Mashiinka - Mashiinka, Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha Shiinaha Shiinaha
Leexashada CNC waxay soo saartaa qaybo iyadoo loo rogo sheyga “ul” una quudiya qalabka wax lagu jaro alaabada wareejinta. On lathe ah in wax la gooyaa wareegaayo halka magaabay a lagu quudiyaa galay workpiece meertada ah. Mashiinka wax lagu gooyo waxaa lagu quudin karaa xaglo kala duwan waxaana loo isticmaali karaa qaabab badan oo qalab ah.
Milling CNC waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah marka loo eego hababka kale ee wax soo saarka. Waa kharash wax ku ool ah socodsiinta gaagaaban. Qaabab isku dhafan iyo dulqaadasho cabbir sare leh ayaa suuragal ah. Dhamaadyo siman ayaa lagu gaari karaa.